Nature esihambisana indoda kulo khona kwakhe njengoba oluthile lwento ephilayo, futhi abantu njengoba umphakathi amasiko nezenhlalo iyonke. Ngokusho ososayensi abaningi nezazi zefilosofi, abantu ngokwabo ngokugcwele imikhiqizo yemvelo kanye nentuthuko yayo kwemvelo. Yiqiniso, umuntu akakwazi ukukhipha zenkolo umbuzo umongo. Eqinisweni, ngokuvumelana abantu abaningi ku-iplanethi enguMhlaba, umuntu wadalwa uNkulunkulu (futhi abanye bathi khona ngoMdali ngezinkulumo Nature). Iqiniso ukuthi onjalo bemvelo - ithempeli noma workshop, zama razzobratsya kulesi sihloko. Kodwa ekuqaleni - okuncane mayelana nemigomo.
It - elisizungezile. It ihlukaniswe yaba eziphilayo eziphilayo nezingaphili. Ukuze kufaka imithombo wezinto amaminerali kanye emfuleni, bemhlaba nemanti, amatshe nesihlabathi - ngisho nezinto ezingaphili. Yonke into ihamba, ikhula, azalwe futhi lufe - izilwane zasendle. Siqukethe zezitshalo nezilwane, futhi kakhulu kepha umbhalela njengomfowabo zilwane. Biosphere, futhi noma yini ehlangene nakho - nemvelo. Ithempeli noma workshop elomuntu iyini indima yalo e ubuhlobo Blue Planet, njengoba umphefumulo ophilayo?
Nature - Workshop
"Indoda - isisebenzi kuwo." La mazwi adumile Bazarov Turgenev sika wathi umlomo, isikhathi eside enyakaza izingqondo wabaholi abasha yesayensi. iqhawe Le noveli sika - umuntu ngempela eziphikisa. Wayengumuntu Undercover futhi kufihlwe nihilist romantic kanyekanye. Le nhlanganisela obhubhisayo kubangela imibono yayo imvelo olutheni olumangazayo, imfihlo. Konke kuncike indoda ezinengqondo futhi imisebenzi yakhe. Ngo ukuqonda uhlobo Bazarov kufuze sizuze - okungukuthi injongo kwayo! Yiqiniso, wonke umuntu (ngisho - umlingisi inoveli) unelungelo lokuthathwa njengomsulwa imibono yabo, wazikhethela: bemvelo - ithempeli noma workshop? Wonke umuntu onesifiso esifana nesakho nihilism Bazarov, kungase kubonakale sengathi konke angase ashintshwe ukuze alungise ngokwabo. Owesilisa, ngokombono wabo - inkosi bemvelo, ufaneleke ukuthola lezi zenzo, kumenze ezinhle. Kodwa bheka wagcina kanjani ukuphila kwakhe njengomuntu iqhawe. Ngokusho kweminye ukutolika yesimanje imisebenzi usosayensi abasha ubulala Nature yena (ngomqondo ongokomfanekiso ka izwi). isizathu Prosaic kodwa kakhulu - nokuklwebheka phezu umunwe iqhawe kulabo abangena nommese ngiyibhimbi ngenqubo yokuphila nokufa nabafayo! izizathu Nullity kuphela kufanele ugcizelele ukungalingani force ngaphambi kokufa kwakhe, njengoba akusikho ukusiphika.
Umsebenzi elimazayo zabantu
Imiphumela ethile yezenzo zesintu (ukuthuthukiswa intuthuko kwezesayensi nakwezobuchwepheshe, ukuthuthukiswa izidubedube kanye nokusetshenziswa sokungacabangi kwemithombo yemvelo) ngezinye izikhathi inhlekelele. Lokhu kubonakala ikakhulukazi namashumi okugcina eminyaka. Nature nje abakwazi ukumelana nethonya elingaka, futhi uqala kancane uze ufe. Futhi-ke uzonyamalala, izinhlobo eziningi zezitshalo nezilwane, kuhlanganise nomuntu, njengoba zezilwane ezincelisayo. Zonke esiqokiwe inkinga edabukisayo sokusinda lwesintu futhi zonke izinto eziphilayo. Futhi uma isikhathi akuvimbi, konke okuholela global, kube nemiphumela ngenakugwemeka.
Lapho eya ethempelini?
Lezi zenzakalo baphoqeleka ukuba sicabange ngokungathí sina: yini okufanele ube ubuhlobo obuseduze? Wake wayisebenzisa yini ikhampasi: ithempeli noma workshop? Izimpikiswano esivuna iphuzu yangaphambili buka, ngempela onohlonze. Phela, uma abantu ingeyamakhosi kumama imvelo njengoba ithempeli, eMhlabeni namuhla ngeke sazi izinkinga nge imvelo, amabutho ku ikhambi okuyinto kokuchitha umphakathi okuqhubekayo ososayensi. Futhi isikhathi kulindeleke ukuba ezinye izazi, kukhona sazikhohlwa!
Ngokuqinisekile, nemvelo - ke uyithempeli kwasekuqaleni. Futhi kukhona baye ngomuzwa ojulile ukholo futhi senze khona ngaphandle kokuphula ngokwezifiso aqine.
Nature - ithempeli noma workshop?
Izimpikiswano esivuna ngokuvumelana elingenakuphikwa. Okokuqala, umuntu uqobo iyingxenye enkulu nemvelo. Owesilisa imvelo akufanele ngisho kubhekwe eceleni komunye nomunye. Ziyakwazi omunye. Okwesibili, ubuhlobo kuzomele sifake wemfanelo okhethekile njengomuntu okunengqondo, indoda phambi nemvelo, sakhe sengqondo sokukhathalela. Kusukela ebuntwaneni, kwabanye kubalulekile ukuletha lo muzwa ukunakekela labo siye walawula. Futhi imisebenzi yenkampani ngomqondo ongokoqobo of "yokulawula" wonke imvelo.
Kule ndaba, njengoba "nemvelo - ithempeli noma workshop" kungasiza ososayensi ukufunda imisebenzi ubuhlakani, okuningi phambili imibono yabo yoqondayo zamanje zezwe.
Vernadsky, isibonelo, he was fike of labo lokuqala waveza ubunye indoda kanye nemvelo. I uHlu Jikelele Lwamakheli, ezishintshwe imisebenzi womuntu ezinengqondo, ekuqondeni kwakhe, uhambelana nomqondo noosphere. Lena - endaweni entsha engqondweni lapho lunqume ukuthuthukiswa imisebenzi womuntu. Anakho yena, nomthelela omkhulu izinqubo zemvelo, kwaze kwaba sekubhujisweni kanye nokwenzeka self-ukubhujiswa. Ngo izimfundiso abantu noosphere emelelwa igxile ngokujulile emvelweni, futhi isintu - ekuletheni Geological aguqula ukubukeka ngayo le planethi, ukubukeka kwayo. kwakhiwa noosphere athuthukisiwe is by umphakathi wonke zabo ukuze bakhonze izithakazelo nokunonophala mutual ukuthuthukiswa oluphelele.
Njengoba Ubusika inhloli futhi lapho enza
Vegetarian ne nommese: surgeonfish
Plateau Iranian: kwendawo indawo, indawo, inqwaba yezinto zemvelo kanye nezici
Amagama esijabulisa kunazo zonke amantombazane: uhlu amaqiniso ezithakazelisayo
Izakhiwo kanye amakhemikhali kwamafutha. Ukuthola izindawo amanoni chemical
Amazinga ezobuchwepheshe zochwepheshe Ukuvikelwa zabasebenzi: imiqondo eyisisekelo
Waterpark, Nesebar. Aqua epaki Nessebar, Bulgaria. Ukubuyekeza, izintengo, izithombe